China Yakazara Steel Dome Musoro Bofu Rivet Ine Yakakura Musoro fekitori uye vagadziri | Yuke
Iyi dome head blind rivet zvigadzirwa zvakagadzirwa nesimbi. Inogona kuva yakasimba, yakawanda-isina kunetseka, inoshanduka uye yakawanda fashoni. Iyo ine yakakwira plastiki, yakanaka kuneta kuramba, uye yakaoma uye gobvu. Uye inogona kushandiswa kumarudzi akasiyana-siyana.
Isu tiri kugadzira hombe yekusimbisa muChina, rivets, nzungu, ruoko riveter ndizvo zvigadzirwa zvedu zvikuru.
Tinogona kugadzira akasiyana marudzi ealuminium blind rivet uye zvakare tinokwanisa kugadzirisa zvinhu sezvaunoda, tinoda kukupa iwe mutengo unokwikwidza, uye kuvaka kushandira pamwe kwakareba newe nenguva yako.
Material: Muviri Wesimbi / Steel Stem
Surface Kupedzisa: Zinc plated/Zinc plated
1.Professional kugadzirwa ruzivo.
YUKE RIVET inyanzvi mubofu rivet, rivet nati, inosunga kweanopfuura makore gumi.
2.Pedzisa zvigadzirwa zvekugadzira
Tine mutsara mumwe wakazara unosanganisira muchina unotonhora wekugadzira, muchina wepolish, muchina wekurapa, muchina wekuunganidza, muchina wekuyedza, muchina wekurongedza uye zvichingodaro.
3.Nguva pfupi yekuendesa.
Isu tichavimbisa 15 ~ 20 mazuva ekutumira kune imwe mudziyo
Isu zvakare tichagadzira imwe rivet mustock.
Isu tinoshandisa ekisipoti standard mapakeji uye matireyi.
Mapepa ekuchengetedza achashandiswawo zvakanyanya mukurongedza zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi.
Yakavambwa muna 2007, Wuxi Yuke anga ari nyanzvi yekugadzira mapofu rivets uye fasteners kwemakore mazhinji.
Tine huwandu hwakazara hwekutarisira uye kugadzira kuti tive nechokwadi chemhando yepamusoro zvigadzirwa nemasevhisi.
Zvigadzirwa zvedu zvinotengeswa kunzvimbo dzese dzepasi uye zvine mukurumbira wakanaka. Tine hukama hwenguva refu nevatengi vedu.
Panguva imwecheteyo, isu tinosanganisawo tsvagiridzo nekusimudzira, tinotenda kuti tinogona kuunza zvigadzirwa zviri nani uye masevhisi ari nani kune vatengi vedu. Tinogona kuunza chiitiko chinogutsa kune vatengi vedu.
Zvakapfuura: Aluminium Dome Head Bofu Rivet NeMusoro Mukuru
Zvinotevera: Dome Head Bofu Rivet Ine Ruvara Painting
Dome Head Bofu Rivet Stainless Simbi
Flat musoro riveting nati